TLD के हो? शीर्ष स्तर डोमेनहरू वर्णन गरियो Martech Zone
एक TLD के हो? शीर्ष स्तर डोमेनहरू वर्णन गरियो
आइतवार, नोभेम्बर 20, 2016 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
यदि तपाईं कुनै डोमेन नाम पार्स गर्नुहुन्छ भने शीर्ष-स्तर डोमेन अन्तिम डट पछि अन्तिम खण्ड हो। त्यो एक डोमेन नामको पदानुक्रम भित्रको उच्च स्तर हो। त्यसो भए martech.zone, को TLD is .com.
जब वेब अमेरिकामा पहिलो पटक सुरू गरिएको थियो, डोमेन नामहरू सम्झन यो एकदम सजिलो थियो। .com मतलब तपाईं कम्पनीको साइटमा हुनुहुन्थ्यो, .org यसको मतलब यो हो कि तपाईं एक नाफा नकमाउने साइटमा हुनुहुन्छ, .edu यसको मतलब यो हो कि तपाईं विश्वविद्यालय वा स्कूलको साइटमा हुनुहुन्थ्यो, .net यसको मतलब तपाई एक नेटवर्क मा थिए, .मिल यसको मतलब तपाई एक सैन्य स्थापना को साइट मा थिए, र .gov यसको मतलब यो हो कि तपाईं सरकारी साइटमा हुनुहुन्थ्यो। डोमेन नाम .com, .NET, र .org को लागी कुनै प्रतिबन्ध बिना दर्ता गर्न सकिन्छ तर अन्य विशेष उद्देश्यहरूमा सीमित थिए।
TLDs आईसीएएनएन द्वारा स्वीकृत र बेचिन्छ:
ICANN एक नाफामुखी नाफा नकमाउने सार्वजनिक फाइदा निगम हो, विश्वभरिबाट आएका सहभागीहरूसँग, ईन्टरनेटलाई सुरक्षित, स्थिर र अन्तर्क्रियात्मक राख्न समर्पित छ। यसले प्रतिस्पर्धालाई बढवा दिन्छ र इन्टरनेटको अद्वितीय पहिचानकर्ताहरूमा नीति विकास गर्दछ। इन्टरनेटको नामकरण प्रणालीको समन्वय भूमिकाको माध्यमबाट यसले इन्टरनेटको विस्तार र विकासमा महत्त्वपूर्ण असर पार्दछ।
२०१ 2016 सम्ममा १ 1300०० नयाँ TLDs प्रयोगको लागि उपलब्ध गराईएको थियो र धेरै जसो अवस्थामा सामान्य जनतालाई बिक्रीको लागि सम्पूर्ण सूची हेर्नका लागि भ्रमण गर्नुहोस्। रूट जोन डाटाबेस, जसले gTLDs समावेश सहित सबै शीर्ष-स्तर डोमेनहरूको विवरण दिन्छ .com, र देश-कोड TLDs जस्तै ।बेलायत.
यहाँ TLDs को बारे धन्यवाद को लागी जान्न चाहेको सबै चीज यहाँ छ होस्टिंग तथ्यहरू.
टैग: डोमेनtldशीर्ष स्तर डोमेन
स्नैपच्याटमा कसरी असफल हुने
रिटेलरहरू टेक्स्ट सन्देशको साथ अनुभव र ड्राइभि Re्ग सुधार गर्दैछ